Qalabka, Software ... Webware? | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 16, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Isbeddelka warshadaha kombiyuutarka, waxaan soo marnay hardware - qalabka lagama maarmaanka u ah socodsiinta codsiyada. Waanuna helnay Software, xalalka looga faa'iideystay kheyraadkaas si ay u qabtaan shaqada aan ka iibsan karno oo ka rakibi karno warbaahinta kala duwan. Maalmahan, waxaad kala soo bixi kartaa software ah oo aan warbaahinta.
Labaatan sano oo Qalabka iyo Software ah
Qalabka wuxuu leeyahay casriyeyn iyo beddelid. Waxaan si daacad ah u waayey raad-raac dhammaan kombuyuutarradii aan lahaa ilaa maanta. Waxaan hayaa qalfoof aan ka yarayn 5 oo ay weheliyaan hal laptop oo gurigayga ku jira.
Software-ku wuxuu leeyahay qalab rakibid iyo casriyeyn lagu rakibo isbeddelada ku jira barnaamijka barnaamijka. Waa nidaam soo jireen ah oo aan ilaa maanta la shaqeyno oo aan la halgamayno. Waxaan haystay cusbooneysiin software ah maanta kahor oo ii baahday inaan xiro oo aan dib u bilaabo barnaamijkeyga 'MacBookPro'. Weligay wax cusbooneysiin OSX ah ma xumaan, laakiin mar kasta oo aan kaa caawin kari waayo, wax yar baa layga qaataa - anigoo ka fikiraya in waxa ugu xun ay dhici doonaan oo aan lumin doono shaqadayda oo dhan. Waxaan hayaa shebekad wadis oo aan ku keydiyo barnaamijyadayda la soo dejiyey iyo qalabka wax lagu duubo ee CD-ga ah oo aan ku keydiyo inta hartay (oo marwalba aan helo iyaga oo maqan).
Software-ka sida Google Spreadsheet, Google Analytics, Gmail, ExactTarget, iyo tan kale oo kuwa kale ah waxay ku shaqeeyaan 'codsiyada ku saleysan websaydhka' ama 'barnaamijyada ku saleysan biraawsarka' ama xitaa waxaan ku tuurnaa erey gaabin ah, SaaS. Waa soo gaabis aad u xun oo sharraxaya nooca ganacsigu inuu ka badan yahay nooca 'ware' uu yahay. Sidoo kale, codsiyo badan oo SaaS ah ayaa wali leh casriyayn ama sii deyn weyn. Uma baahna rakibitaan ama dib u dhis, laakiin lama heli karo waqtiyo.
Magaca ugu fiican ee codsiyada maanta wuxuu noqon karaa Netware, laakiin waxay umuuqataa Noof ereygan ayaa summad u leh. Webware ayaa laga yaabaa inuu shaqeeyo, laakiin waxay u egtahay C | Shabakad ayaa adeegsanaya taas. Waxay u egtahay in qalabka biraawsarka ay suurtagal tahay - laakiin waa dhawaaq dheeri ah.
Maxaa loo diiday Webware?
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah Webware (ma aanan dareemin astaan ​​ganacsi) waa isbeddelka xiga ee codsiyadayada. Maanta, runti looma baahna codsiyo joojiya. Waxaan ku haynaa boqolaal bog oo ku jira codsigeena shaqada waxaanna soo rogi karnaa bogag cusub adigoon weligood hoos u dhigin kuwii hore. Waan hubaa in waxoogaa horumar ahi ay dhici karaan sidoo kale meesha ay isticmaaleyaashu ku-beddelka ku dhici karaan inta udhaxeysa barnaamijyadii hore iyo kuwii hore.
Macluumaadka waxaa lagu soo koobi karaa duulimaadka, ama miisas cusub oo ku meel gaar ah ayaa la dhisi karaa si loogu waafajiyo kala guurka. Hubaal, waa shaqo dheeri ah, laakiin ujeedkeygu waa inay macquul tahay. Maaha inaan mar dambe carqaladeeyo macaamiisheenna.
Ma haysto wax wadata oo ku shaqeeya gurigeyga. Marar dhif ah ayaan adeegsadaa CD-ga / DVD-ga, sidoo kale. Xaqiiqdii wax kasta oo aan sameeyo hadda waa mid ku saleysan websaydh. Markii aan soo dejisto oo aan rakibo softiweer, sida caadiga ah waxaan ku keydsadaa nuqul aniga Buffalo Tech wadista shabakadda.
Xitaa ganacsiga, looma baahna. Markii aan bilaabay Yar Indiana loogu talagalay Pat Coyle, ma aanan raacin marti-qaade. Codsiga waxaa lagu dhisay oo lagu marti qaaday Ning. Waxaan haynaa dhammaan goobaha domainka oo tilmaamaya Google Apps halkaas oo aan ku isticmaali karno emaylka iyo sidoo kale Google Docs. Ma jiro qalab, softiweer ma jiro… laakiin webware.
Maxaynaan ugu yeedhin Webware?
Tags: hardwaresoftwaresoftware adeeg ahaancodsiyada webkabarnaamijyada webkadhufto ee webkadhufto ee ku saleysan websaydhkawebwareerka
Jan 16, 2008 saacadu markay ahayd 11:38 PM
Taasi waa magac fiican.
Magaca domain horay ayaa loo qaatay
oo ay leedahay shirkadda CNET
Ma garanayo laakiin waa laga yaabaa
Waan ka helay Laakiin miyaydaan iska indha tiraynin “dhexda dhexe” oo xallin lahaa dhammaan dhibaatooyinkeenna sagaashamaadkii. Waan jeclahay webware Xiiso leh in aysan jirin astaan ​​ganacsi. Naxdin URL ayaa loo qaatay sida wax walba oo kale.
Xaqiiqdii waan jeclahay dhammaan barnaamijyada ku saleysan websaydhka ee sii wadaya soo ifbaxa iyo in lagu daro qalabkeyga. Waxaan u isticmaalaa Google Docs sida waalan iyo qof u adeegsada 3-4 kombiyuutar oo kala duwan hal maalin, waa badbaadiye nololeed.
Si kastaba ha noqotee, mar kasta oo aan bilaabo adeegsiga adeeg cusub oo ku saleysan websaydhka, marwalba waxaa jira codkan yar ee ku yaal dhabarka madaxayga oo hal dhibic ka fogaanaya. Qodobkaasi wuxuu yahay markaan luminayo xiriirkeyga internetka, waxaan lumiyay marin u helida dhammaan qoraaladeyda Google, keydkeyga xogta qaansheegadka macaamiisheyda, emailkeyga, IM-ga, sawiradeyda tirada badan ee Flickr, iwm.
Isbedelkaan loo dhaqaaqay dhanka webware-ka ayaa sababaya inaan ku sii badino ukumeheenna hal dambiil. Ka dibna waxaan ku xirnaa xarig dheer dambiishaas oo waxaan ku tuuraynaa meel bannaan. Inta xadhiggu isku xidhan yahay, wax waliba way macaan yihiin. Laakiin markii xadhiggaasi baaba'o, sidoo kale sidoo kale aniga ayaa itaal la'aan ah, sidoo kale.
Waxaan u maleynayaa ujeedka aan halkan ka leeyahay in si Webware-ka ay si dhab ah u baxaan, aan u baahanahay helitaan intan ka badan oo la isku halleyn karo, baahsan, iyo xad-dhaaf ah. Haysashada biraawsar taleefankaaga isku mid ma aha. Hubaal, waxaan ku xidhi karaa laptop-kayga taleefankayga verizon iyo Surf, laakiin haddii aan ka gudbo xadka ballaadh cayiman ama soo degsashada hal bil gudaheed, waa layga xidhayaa. Uma baahni walaac caynkaas ah.
Jan 17, 2008 saacadu markay ahayd 5:04 PM
Funny waa inaad sheegtaa tan. Waxaan kaliya u sheegayay macmiil shalay in wax badan oo ka mid ah barnaamijyada aan wado ay ka jiraan oo kaliya internetka sida codsiyada webka. Hadda waan ogahay waxa loogu yeero sheygan ware webware!
Waxaan inbadan kuhadlayay wax aan idhaahdo… Waxaan marwalba tixraacaa barnaamijyada CMS / Online ee webware horeba… Waan layaabay inaynaan waxbadan ka maqal.
Webware cod fiican. Dhawaan, dhammaan shirkadaha waaweyn ee kombiyuutarka / IT-ga waxay iskaga hor imaan doonaan badeecadooda Webka. Tani waa isbeddelka oo wali bilaabanaya inay dhacaan markii la soo ifbaxay barnaamijka softiweerka ah ee websaydhka.